10 inch piritsi. Ndeipi yekutenga? Iwo akanakisa mhando dze2022
10 inch piritsi. Ndeipi yekutenga?
Panguva ino tinokupa iwe kuenzanisa kuti iwe ugone kusarudza iyo yakanakisisa 10 inch tablet. Isu takadzikisira sarudzo kune akati wandei mamodheru anotarisisa pane gumi ", nenzira iyi, tinopa kwauri ayo akatengwa zvakanyanya mukati megore, iwo ane yakagadziridzwa bhajeti renji muhomwe yako, uye zvakanyanya. ine simba kana iwe uchida kutenga piritsi ine maitiro aya.
1 10-inch mapiritsi kuenzanisa
1.1 Huawei MediaPad T10s. Zvakanakisa
1.2 Samsung Galaxy Tab A. Imwe yeakanyanya kukwana
1.3 Huawei Mediapad T3. Iyo yakachipa sarudzo
1.5 Yakanakisa 10-inch piritsi yemhando mutengo
2 Zviyero zve 10-inch tablet
3 Akanakisa 10-inch mahwendefa emhando
4 Ungasarudza sei 10-inch piritsi
4.1 Screen mhando uye kugadzirisa
4.2 RAM uye processor
4.3 Self Storage
5 Kupi kunotenga 10-inch mapiritsi
6 Mhedziso yekupedzisira, maonero uye kuongorora
10-inch mapiritsi kuenzanisa
Hwendefa 10.0 Inch ...
Hwendefa 10 ...
Kunyangwe iwe uchigona kudzvanya pane yega yega wongororo yemhando dzatinonyora pazasi uye pazasi isu tichataura nezve hunhu hwemunhu yeimwe neimwe yemamodheru kuitira kuti uve nayo muchidimbu modhi uye haufanirwe kuisa piritsi yega yega yakaongororwa.
Pakusarudza piritsi ye-10-inch tinowana mienzaniso yakawanda, kubva kune zvakasiyana-siyana. Izvi zvinoreva kuti kune marudzi ese emitengo aripo mupfungwa iyi. Chimwe chinhu chinogona kuita sarudzo yekusarudza haisi nyore nguva dzose kune vatengi. Ndechipi chiri nani, chepamusoro-soro kana chakachipa?
Zvechokwadi, zvinoenderana nezvinhu zvakawanda. Mushandisi anofanira kugara akajeka nezve mashandisiro aanotarisira kupa yakataurwa piritsi. Kune munhu ari kuzoishandisa kazhinji, zviri nani kubhadhara mari yakawanda uye kubheja papiritsi gumi-inch ine simba uye unoziva kuti ichagara makore akati wandei. Pamusoro pekuchengetedza kushanda zvakanaka nekufamba kwenguva.
Takakuisa muboka akanakisa 10-inch mapiritsi kuitira kuti vagokuudzai zvakanaka nezvakaipa pamusoro pomumwe nomumwe wavo.
Huawei MediaPad T10s. Zvakanakisa
Nenzira ye mhedziso Takaisa senzvimbo yekutanga nekuti panhau ye mhando yemutengo Ndiyo imwe yeakanakisa pamusika, nekuda kweichi chikonzero ndiye zvakare mukundi wechikamu ichi. Nhasi kune anenge 160 euros hatigone kuwana akawanda sarudzo. Nekudaro, iyi 10-inch piritsi inotipa kutsetsenura uye kuzvimiririra kukwanisa kuishandisa mumaawa mumabasa akajairika. Iyo zvakare chishandiso chinokwanisika chemabasa akati wandei kamwechete kana tikasaidzvanya zvakanyanya.
Chimwe chinhu chakaipa chatinogona kutaura sezvo pasina mudziyo wakakwana inyaya yekuti dzimwe shanduko dzinogona kuitwa kune vhidhiyo system kuvhara mamwe mafomati. Nekudaro, kugarisana kwacho kwakanaka uye isu tinogona kuishandisa mune ese marudzi emamiriro. Kune avo vatengi vanoda piritsi hombe rinenge 10 inches iyi pasina mubvunzo ndiyo yakanakisa chishandiso chatinogona kukurudzira izvozvi, yakakwana kune yakaomesesa bhajeti.
Samsung Galaxy Tab A. Imwe yeakanyanya kukwana
Nenzira ye mhedziso Tinogona kutaura kuti iyo yakasarudzika modhi, kwete chete nekuda kwayo. Uyewo nokuda kwekugadzirwa kwayo kunoyevedza. Ipiritsi kubva kuSamsung imba inomira kunze ichienzaniswa nemamwe nekuti inotiyeuchidza nezve kukwikwidza kwakananga kwePad, maererano nechimiro.
Vamwe ve hunhu hwakanaka Kunze kwechimiro uye chimiro chatakambotaura, inyaya yekuti haisi iyo chete hunhu hunooneka, asi kuti zvinhu zvakashandiswa kugadzira iyi Samsung modhi ndezvemhando, zvakakwana kuti tisatyora iyo. kekutanga kana semuenzaniso tikawira pasi.
Kana isu tichifanira kutaura chimwe chinhu chatinoda zvakanyanya, ingangove skrini, hongu, ndiyo imwe yakakura kwazvo (10,4 inches) uye kubereka kwemavara kwakanakisa, kunyangwe isu tichiti iwe unofanirwa kuterera zvakanyanya. kubva nekuda kwepaneru yayo.
Huawei Mediapad T3. Iyo yakachipa sarudzo
Iyi modhi ndiyo yakanaka kune avo vari pabhajeti uye saka izvo zvavari kutsvaga yakachipa 10-inch piritsi pasina kubayira zvinhu zvakawanda zvemhando.
Chimwe chezvinhu yakanaka iyo ine Huawei Mediapad T3, ndizvo inomira kunze kwemhando yayo yekuteerera. Vatauri vane piritsi iyi vane mukana wekuita kuti ive yakakwana nharembozha iyo inokatyamadza yakanakira kuve pamba uye nekupa iyo multimedia kushandisa. Kunze kweizvi
Kana isu tichifanira kudoma chimiro zvakaipa Ingava kamera yako, iyo isingapi zvakanakisa zvako. Kunyangwe ichi chiri chinhu chinogara chichidzokororwa mune iwo mahwendefa akachipa angave ari 10 inches kana kwete. Kana mutengo wacho uchigona kudzikiswa, inenge inogara ichitanga nekamera, saka hazvitishamise zvakanyanya sezvo iri modhi iri kuita zvakanaka.
Kupedzisa izvi tablet kuenzanisa Isu tinokurudzira iyo Huawei Mediapad M5 Lite 10, imwe 10-inch modhi yaunofanirwa kunyatso funga kana uchitenga piritsi.
Kana iwe uri kufunga kuvandudza yako yekare 10 inch piritsi Nekuwana yepamusoro-inoshanda modhi, ine simba, ine mashandiro emvura uye, nekuwedzera, iwe haudi kuisa mari yakawandisa, iyo itsva Huawei Mediapad M5 Lite 10 ndiyo chaiyo piritsi rawaitsvaga.
Yakaunzwa nekambani yeChinese mwedzi mishoma yapfuura, iyo Huawei tablet Mediapad M5 Lite 10 iri pamusoro peiyo chinzvimbo che mahwendefa epakati-yepamusoro, ine zvimwe zvepamusoro-soro pane zvepakati-renji.
Chekutanga pane zvese, inomira kunze kune yayo hombe IPS skrini ye 10,1 inches ine 1920 x 1200 Full HD resolution iyo yakanakira zvese zvekuona multimedia zvirimo, pamwe nekuverenga kana basa rezuva nezuva. Ichi chidzitiro chinokwenenzverwa nemataurirwo ayo mana eHarman Kardon, maviri ari mune imwe neimwe yemafuremu madiki.
Mukati mayo ine Qualcomm Snapdragon 435 processor ine macores masere anotsigirwa ne3 kana 3 GB ye RAM uye 32 kana 64 GB yekuchengetedza mukati, zvichienderana nemuenzaniso waunosarudza, uye kuti chero zvakadaro unogona kuwedzera nekushandisa microSD kadhi. Pamusoro pezvo, nekuda kwekushanda kwe processor yayo, uye bhatiri rayo 7500 mAh, Huawei Mediapad M5 Lite 10 inovimbisa maawa nemaawa ekuzvimiririra nekuvaraidza.
Sehurongwa hwekushandisa tinowana Android 7.0 Nougat pasi peEMUI 5.1 maitiro ekugadzirisa.
Iyo Huawei Mediapad M3 Lite 10 piritsi zvakare ine makamera maviri ane 8 MP sensor imwe neimwe iine sensor yemunwe kumberi inotsigira ma gestures ekufambisa iyo system interface uye maapplication, WiFi neBluetooth yekubatanidza, pre-yakaiswa Microsoft Office 365 apps, uye sarudzo LTE kune avo vanoida.
Yakanakisa 10-inch piritsi yemhando mutengo
Nepo kusarudzwa kwemapiritsi e10-inch nhasi kwakafara, pane imwe modhi inomira pamusoro pemamwe, yatakambotaura kaviri. Ipiritsi inotisiya nemutengo wakanakisa wemari pamusika. Tinotaura nezve Huawei MediaPad T5.
Ndicho chizvarwa chazvino cheChinese brand. Ane a 10,1-inch screen saizi, ine Full HD resolution. Saka zvirimo zvinogona kutariswa zvakanaka kwazvo mairi. Mukati mayo tinowana Huawei Kirin 659 processor, iyo inouya ne3 GB ye RAM uye 32 GB yekuchengetedza mukati.
Bhatiri repiritsi iyi i5.100 mAh, izvo zvichatipa kuzvitonga kukuru. Ruzha chinhu chinomira pachena muhwendefa iri, nekuda kwekuvapo kwevatauri vaviri vestereo mairi. Vanotivimbisa chiitiko chakanaka chekuteerera. Seyo inoshanda sisitimu ine Android Oreo, iyo inopa yakareruka interface, iyo inobvumira kushanda kuri nani kwehwendefa.
Pamusoro pezvo, piritsi iyi ine dhizaini yakatetepa, inoita kuti zvive nyore kutakura newe nguva dzese. Zvakare zvakareruka, huremu huri pasi pe500 gramu. Naizvozvo, zviri nyore kuitakura mubhegi pasina dambudziko. Tafura yakanaka, inogona kushandiswa kupedza zvirimo, kutarisa, kudzidza kana kushandiswa sehwendefa yevana. Yakasiyana-siyana uye nemutengo mukuru.
Kune zvese zviri pamusoro, takatarisana neimwe yemhando yepamusoro-yemutengo mahwendefa sezvinoonekwa mune chigadzirwa pepa. Iyi modhi ine zvibodzwa zve 4,5 kubva pa5 uye kupfuura 283 ongororo yakanaka nevashandisi, zvichiita kuti ive yakachengeteka kubheja.
Zviyero zve 10-inch tablet
Nhasi mahwendefa akawanda e-10-inch (ayo anowanzoita 10,1 kana 10,5 inches muhukuru), kazhinji vane 16: 9 skrini reshiyo. Kufanana neiyo yatinayo pama smartphones. Zvakare iyo 3: 4 skrini reshiyo yakajairika. Zvakare, nekuuya kwemamodheru ane mafuremu akatetepa kwazvo, tiri kutanga kuona mamwe achasvika nereshiyo ye18: 9. Chimwe chinhu chinokutendera kuti utore mukana weiyo skrini zvakanyanya, pasina saizi yepiritsi kuva yakakura pairi.
Zviyero kana zviyero zvinowanzosiyana zvichienderana nemuenzaniso kune imwe, kunyanya zvichienderana nekuti kumberi kunoshandiswa sei nechidzitiro. Mamwe mahwendefa akaita seHuawei's MediaPad T5 anoyera 24,3 x 0,78 x 16,4 masendimita. Nepo vamwe vakaita seSamsung's Galaxt Tab vane zviyero zve 27 x 16 x 5 centimita.
Kazhinji, piritsi ine 10-inch iri pakati pe22 ne30 centimita pakureba / kureba. Hupamhi ndechimwe chinhu chinowanzo fanana mumamodheru mazhinji, pakati pegumi neshanu negumi nenomwe, mune inonyanya kuzivikanwa nhasi. Nepo ukobvu kazhinji kunosiyana zvishoma. Kunyange zvazvo mahwendefa ari kuramba achipera. Saka muzviitiko zvakawanda tinoona ukobvu isingasviki centimita, mumamodheru azvino.
Huremu chinhu chinoenderanawo nemuenzaniso. Zvichienderana nemidziyo inoshandiswa, pamwe nehukuru hwebhatiri, panogona kuve nekusiyana kwakasiyana kubva kune imwe modhi kuenda kune imwe. Kunyangwe zvakapoteredza 500 gramu Isu tinogona kuona kuti apa ndipo pane mahwendefa akawanda e10-inch nhasi.
Akanakisa 10-inch mahwendefa emhando
Parizvino, mhando dzese dziri kunze uko mamwe mahwendefa ane 10 inch saizi anoshandisa Android sechirongwa chekushandisa. Saka sarudzo yacho yakanangana neizvi. Mukati mechikamu ichi mune mamwe anofanirwa kutariswa, nekuti anotisiya nemapiritsi emhando yepamusoro.
Korean muchiso ndeimwe yeakanyanya kukosha muchikamu chehwendefa. Vanofanirwa kune yavo zvikwereti zvakasiyana-siyana zvemhando. Mukuwedzera, iyo yakawanda yemhando dziripo muhuwandu hwayo dzine 10-inch skrini, mune dzimwe nguva 10,1 kana 10,5. Asi vakakwana pane zvauri kutsvaga. Mienzaniso yakaita seGalaxy Tab S kana Galaxy Tab A inozivikanwa kune vashandisi.
Nokudaro, vane sarudzo yakakura yemapiritsi, ayo anomira kunze kwehutano hwavo. Chinhu chakanaka ndechekuti kune mamodheru ezvese, saka kana iwe uri kutsvaga kushanda kana kutarisa kuti udye zvirimo, pane zvakanaka sarudzo dziripo. Nezvemitengo, Samsung haisi iyo yakachipa, asi ivimbiso yemhando yepamusoro nguva dzose.
Huawei ndeimwe mhando ine kubheja pamusika wetablet. Chiratidzo cheChinese, sekunge nemafoni avo, anotisiya nesarudzo yakanaka inomira kunze kwekukosha kwayo kwemari. Vane mhando dziripo muhukuru uhu, dzine yakanaka specs uye mutengo wakanaka kwazvo. Kunyangwe ichi chiri chinogara chiri mumahwendefa e brand.
Naizvozvo, ivo isarudzo yakanaka yekufunga kana iwe uchitsvaga mhando yemhando, asi pasina kubhadhara yakawandisa mari yayo. Mienzaniso yakaita seMediaPad T5 ndiyo inogona kuzivikanwa zvakanyanya kune ruzhinji rwevashandisi.
Sezvineiwo, Lenovo yakasvetuka nenzira huru munyika yemapiritsi uye inotipa akati wandei 10-inch modhi iyo inofanirwawo kutariswa sezvo iine kukosha kukuru kwemari yakagadziridzwa zvakanyanya.
Imwe mhando yekugadzira smartphone inewo mahwendefa. Mafoni eXiaomi ave akakurumbira pasi rese, zvakare muSpain, nekuti ane mamwe yakanaka specs uye mitengo yakaderera zvakanyanya avo vevakwikwidzi vako. Chimwe chinhu chinotakurawo kune mahwendefa emugadziri emhando.
Mahwendefa avo haazivikanwe seaya emamwe mabhureki. Kunyangwe isu tine zvimwe zviripo mhando dzekufarira mukhathalogi yako. Vese vane zvirevo zvinoenderana uye mitengo inosvikika, inovaita sarudzo yekufarira kukuru.
Ungasarudza sei 10-inch piritsi
Screen mhando uye kugadzirisa
Saizi handicho chega chinhu chakakosha kana tasvika pakuratidzwa. Kubva pa kugadziriswa uye kunaka kwayo. Ichi chinhu chinozowana kukosha zvichienderana nekushandiswa kwaunoda kugadzira piritsi. Kune vashandisi vanoda kukwanisa kuona mafirimu pairi, chinhu chakakosha zvikuru. Nekuti inobata zvakananga mushandisi ruzivo.
Zviripachena, iwo anodhura mamodheru ndeaya ane zvirinani skrini yekugadzirisa uye mhando yemufananidzo. Kune akati wandei mahwendefa Vanotosvika ne4K resolution. Vazhinji vari muchikamu chepakati-renji vari kuunza 2K. Chinhu chinofanira kugara chichifungwa. Kunyangwe ichave iko kushandiswa kwaunoda kugadzira kwepiritsi iyo inokunda kana uchitsvaga yakakwirira kana yakaderera mufananidzo mhando.
RAM uye processor
Iyo processor chinhu chinofanira kubvunzwa nguva dzese. Mazhinji mahwendefa ari pamusika, kunyanya ayo anoshandisa Android senge sisitimu yekushandisa, anoshandisa iwo ma processors atinowana mumafoni. Saka zviri nyore kuziva dzinza ravari. Iwo ane simba zvakanyanya Snapdragon 835 uye 845 mazuvano. Saka mamodheru anayo ndeepamusoro-soro.
RAM chinhu chine hukama zvakanyanya kune processor. Paunenge uchitsvaga piritsi nyowani, zvakajairika kuti vashandisi havape zvakanyanya kukosha kune RAM. Asi chinhu chinofanira kurangarirwa. Kunyanya kune avo vari kutsvaga piritsi rekushanda naro. As yakakura RAM inobvumira zvimwe zviito kuti zviitwe panguva imwecheteyo, inofambisa multitasking.
Naizvozvo, mashandisiro auri kuda kuita epiritsi ndiwo achasarudza izvi. Kuona mavhidhiyo kana kungobhurawuza haudi iyo ine simba kwazvo modhi kana neiyo RAM yepamusoro. Asi kune vashandisi vanoda kushanda kana kukwanisa kuishandisa mumhando dzese dzemamiriro, nezve 4 GB ye RAM ingave yakarurama.
Kuchengeta chimwe chinhu chisingafanirwe kunge chiri chinhu chaunofungidzira paunenge uchitenga piritsi. Kunyange zvazvo chiri chinhu chakakosha, chinhu chinonyanya kukosha munyaya iyi tarisa kuti yaunoda modhi ine mukana wekushandisa microSD, iyo inogona kutibvumira kuwedzera akati nzvimbo yekuchengetedza. Sezvo mahwendefa akawanda haana mukana uyu.
Kazhinji pane zvese maererano nekuchengetedza. Tafura ine 32 kana 64 GB inowanzopfuura zvakakwana. Kunyangwe kune vanhu vari kuzotsvaga uye kurodha mapurogiramu, 32 GB inokwana nguva dzese. Asi kune imwe yakasiyana uye yakawanda kushandiswa, iyo ichashandiswa zvose mubasa uye mukuzorora, zviri nani kubheja pane chimwe chinhu che64 GB uye icho chine mukana wekuwedzera nzvimbo.
Kubatana chikamu chinobata akati wandei. Kune rimwe divi, iwe unoda kuti piritsi iyi ive neinternet. Kunyangwe ese mamodheru Vanotosvika neBluetooth neWiFi. Saka izvi hazvisi kuzova dambudziko. Iyo vhezheni yeBluetooth inogona kusiyana kubva kune imwe modhi kuenda kune imwe, pamwe nekuenderana kweWiFi. Zvakanaka, inofanira kunge iri 802.11 a / c. Kuvapo kweNFC hachisi chinhu chakakosha.
Kune rimwe divi, isu tinofanirwa kufunga nezve madoko. Zvingave zvakanaka, uye zvingave zvakakosha kune vakawanda vashandisi, kuve ne USB port. Zvakare mukana wekuve neslot yeSD kana microSD yakakosha. Chii chimwe, mumapiritsi akawanda hamuna headphone jack. Kunyangwe ukaronga kushandisa zvirimo, saka unofanirwa kuve nechokwadi kuti inazvo.
Sezvakaita nemafoni, isu tinoda iwe bhatiri repiritsi richagara kwenguva yakakwana kuti ndikwanise kuishandisa kwenguva yakareba sezvinobvira. Kunyangwe, zvichienderana nekushandiswa kunofanira kuitwa yeiyi 10-inch piritsi, saka ine kukosha kukuru kana kushoma kune yakataurwa mushandisi.
Kune vanhu vanozoshandisa piritsi zuva nezuva, kubasa kana kudzidza uye kuzorora, ipapo bhatiri inonyanya kukosha. Naizvozvo, ivo vanofanirwa kubheja pamapiritsi ane mabhatiri makuru. Hushoma hwe7.000 mAh mupfungwa iyi hunofanirwa kukwana kuzvimiririra kwakanaka. Kunyanya mumamodeli matsva ndicho chinhu chauchasangana nacho.
Vashandisi vanenge vasiri kushandisa mapiritsi avo kazhinji, zvingave zvisina basa zvakanyanya. Asi hazvisi izvo kuti iwe unofanirwa kubheja pamamodeli ane bhatiri diki. Muzviitiko izvi mhando dzine 5.000 mAh dzinogona kupa kuita kwakanaka, uye kugara zuva rose zvakare.
Kupi kunotenga 10-inch mapiritsi
Paunenge watove pachena kuti iwe unoda 10-inch piritsi, inguva yekubvunza nzvimbo kwaunogona kutenga imwe. Ichokwadi ndechokuti zviri nyore kuwana mapiritsi pamusika. Pane kusarudzwa kwezvitoro umo zvichida kusarudzwa kwemamodheru kwati kurei, kana kupa mitengo iri nani.
Chitoro chepamhepo chinogona kunge chiri sarudzo inonyanya kufarirwa pakati pevatengi. Hazvishamisi, nokuti vane sarudzo yakakura kwazvo yemapiritsi pamusika. Iwe unozokwanisa kuwana ese 10-inch mapiritsi mauri kufarira muchitoro. Vane akawanda anoita uye mamodheru aripo, zvichiita kuti zvive nyore kusarudza imwe.
Uyewo, mitengo inowanzova yakaderera. Kune zvakare anowanzo kupihwa nguva nenguva, sezvo paine kuderedzwa kutsva svondo rega rega. Saka zvinokwanisika kuti iwe uchawana piritsi rakadaro nemutengo wakaderera.
Iyo inozivikanwa cheni ye hypermarkets inomira pachena kuve ne kusarudzwa kwakakura kwemapiritsi gumi-inch. Mune yako, isu tinowana mamodheru kubva kumhando huru, pamwe nemamwe ane zvakanyanya kuwanikwa mitengo. Naizvozvo, isarudzo yakanaka kune vashandisi vari kutsvaga chimwe chinhu chakachipa. Sezvo mitengo yacho ichiwanzo wanikwa.
Ivo vanogona kutengwa zvese muchitoro uye kuburikidza newebhusaiti yavo. Chikamu chakanaka pamusoro pechitoro chemuviri ndechekuti inobvumira mushandisi kubata modhi mumaoko avo, kuitira kuti iwe uone kunaka kwekrini, kuti inonzwa sei kuibata, uye nokudaro kukwanisa kusarudza nenzira iri nani.
Chitoro chemagetsi chinozivikanwa ndechimwe chezvakanakisa sarudzo kana uchitenga mahwendefa gumi-inch. Vane sarudzo huru yemhando, yemhando dzose. Nokudaro, inokubvumira kuti uwane nyore nyore chimwe chinhu chinonakidza kumushandisi. Mukuwedzera, nekuva nezvitoro, unogona kuona uye kuedza mahwendefa aya muhupenyu chaihwo. Chii chinobatsira kuziva.
Imwe yemabhenefiti makuru eMediaMarkt ndeyekuti vane kukwidziridzwa kwakawanda. Kunyangwe mitengo yakadzikira, nezvipo izvi uye kukwidziridzwa, izvo zvinovandudzwa svondo rega rega muchitoro uye online, zvinokwanisika kutenga piritsi nemutengo wakaderera.
Mhedziso yekupedzisira, maonero uye kuongorora
Aya ndiwo mazano edu, tichifunga kuti piritsi re10-inch rinojairirwa kupa a kushandisa mudzimba kana muhofisi, Isu tinofunga kuti kutenga piritsi yeaya maitiro chinhu chinofanirwa kuverengerwa zvakanyanya mutengo. Mukuenzanisa uku takakuisa yakanakisa nerudzi urwu rwescreen, saka zvinoenderana nemutengo wako wekutengesa kusarudza imwe.
Zviri pachena kuti kana tichibhadhara zvakanyanya, tichava nekuvandudzwa kwakawanda, asi ne hapana kana mumwe wavo achabatikana kana ukaishandisa kusefa, internet, masocial network uye zvakare.
Of which zvakawanda zvakatengwa last year une vekutanga 3 vanovawo ndivo vakaonekwa mahwendefa emhando yepamusoro-mutengo, uye kana tichifanira kusarudza chimwe chezvitatu, tinokurudzira tablet yeBQ M10, ine kutengesa kuri kuwedzera uye kuongororwa kwakanaka yevatengi uye vashandisi vakaiwana. Iwe unogona kuona kuongorora kwakazara kweizvi pane yedu blog kana iwe uchida kuziva zvakawanda.
Pakutenga tablet, 10-inch modhi inowanzova sarudzo yakanaka Zvevashandisi. Iyo yakanaka skrini saizi yekuona zvirimo (mavhidhiyo, nhevedzano, mafirimu), pamwe nekukubvumidza kuti ushande pachiratidziro ichocho nekunyaradza kwakazara. Kunyangwe vazhinji vashandisi vasingazive kuti ndezvipi zvimwe zvinhu zvinofanirwa kuverengerwa.
Nokudaro, unofanira kuva nazvo zvimwe zvinhu zviri kutariswa paunenge uchizotenga 10 inch size tablet. Nenzira iyi, maitiro acho achave akareruka uye modhi inonyatsoenderana nezvinodiwa nemushandisi ichasarudzwa.
Mahwendefa akadhura » Size » 10 inch piritsi. Ndeipi yekutenga?
12 inch piritsi
8 inch piritsi
7 padiki piritsi
Mahwendefa makuru ekrini
2 makomendi pa «10-inch piritsi. Ndeipi yekutenga? »
2017-06-24 at 8:27 am
Makorokoto pane blog! Inonakidza uye yakakwana.
Ndiri kutsvaga 10-inch tablet inogona kubata basa repamusoro uye kuva nekunzwa kwakanaka kwekutora manotsi uye kushanda nepeni yedhijitari. Ini ndiri mudzidzisi uye ndinoda kuti ishande nevadzidzi, kugadzirira mishumo, kushanda nemahwindo akawanda. Ini handina bhajeti yeipad pro uye handifungi kuti ndinoda mhando yakawanda kudaro, asi handisi kutsvaga piritsi repakati-renji rinorasikirwa nemhepo mushure memwedzi.
Kune vimbiso shoma ini handina isingasviki 2GB ye RAM (Ndinoda kukurumidza uye simba rekushanda neyakavhurika maapplication, keyboard nepeni), ini handidi 4G asi ini ndinoda chinongedzo cheprojekita uye zvimwe zvishandiso, yakanaka bhatiri, yakaderera quadcore processor (ndine lenovo a806 octacore 1.7ghz nhare uye mushure megore inoshanda zvishoma nezvishoma mushure mekupa maawa akawanda ekushandisa pakuita kwepamusoro (multitasking nekudhirowa, zvinyorwa, mufananidzo uye vhidhiyo editing application); ini handidaro. ziva kana kuenzanisa kwacho kwakanaka , asi ndiri kutsvaga kuita kurinani kurinani asi kufomati yepiritsi uye ndinofunga tsananguro iyi inogona kubatsira) Ndine bhajeti rekutenderera € 500 yehwendefa, keyboard, kesi ... Chii chaungaite kukurudzira? Chokwadi iwe une imwe pfungwa yekuti ndeapi mamodheru anogona kusangana nezvido izvi.
Ndinokutendai zvikuru nerubatsiro rwenyu nekurudziro neblog! Basa rakanaka!
Mhoro Miguel, ndinokutendai neruzivo rwakadzama uye zvakare nebasa raunoita. Chokwadi, kuenzanisa kwacho kunonyanya kuitirwa vanhu vane bhajeti rakaomarara, asi ini ndinoda kuiwedzera nekuisa chikamu chevanoda zvakanyanya. Kana iwe usingade iPad, ndinogona kukuudza, sezvawandiudza zvakanaka nehwendefa yandanga ndichifunga nezvayo, yanga iri neiyo Samsung Galaxy Tab S2 (apa une chipo chakanaka) inova imwe yeshanduro nyowani dzandakataurawo nezvayo mukuenzanisa kwangu Samsung. Kana iwe ukatarisa maitiro unoona mafambiro azvinoita, ndakafadzwa pandakaedza, uye nenzira imwechete, kune vashandisi vakaishandisa zvakanyanya, vanofara zvikuru nekugara kwenguva yakareba kwebhatiri kunyange zvakadaro. inogona kubhadharisa chimwe chinhu chinononoka, asi hauzove nematambudziko ekutaura uye zvinogara iwe kwenguva yakareba. Ndinofunga ichazadzisa zvaunotarisira zvakanaka, kwaziso!